बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको सम्पत्ति कति ?
एजेन्सी । पछिल्लो पटक बलिउडमा सफल अभिनेताका रुपमा परिचीत छन् अक्षय कुमार । बलिउड निर्माताहरु अक्षय कुमारलाई लिएर निर्माण गरिएको फिल्मले लगानी उठाउने तथा घाटाको व्यापार नहुने समेत बताउँछन् ।
अर्जुन रामपालकी प्रेमिका गर्भवती
एजेन्सी । बलिउड नायक अर्जुन रामपालकी प्रेमिका ग्याब्रिएला डेमेत्रियाड्स गर्भवती भएकी छिन् । आफ्नो २० वर्षे लामो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गरेका अभिनेता रामपालकी प्रेमिका गर्भवती भएको समाचार उनले इन्स्टाग्राममार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एजेन्सी । बलिउडका चर्चीत अभिनेता सन्नी देवल पनि राजनीतिमा होमिएका छन् । भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहसँग भएको भेटपछि उनी चुनावमा
बलिउड–बलिउडमा एउटा चर्चित नाम हो प्रेम । यो नामले सलमान खानलाई प्राय चिन्ने गरिन्छ । फिल्मी पर्दा भित्र होस् वा बाहिर उनको रोमान्टिक अन्दाज आज पनि उत्तिकै रहेको छ । तर, कमैलाई थाहा छ सलमान खानको कोसँग पहिलो प्रेम बसेको थियो । को थिइन् सलमान खानको पहिलो प्रेम ? कसलाई देखेर सलमान खानको मुटु धड्किन्थ्यो ? उनले आफ्नो चाइल्डहुड क्रसबारे बोलेका थिए ।
बलिउड अभिनेत्री काजलको अजबगजबको लाइफस्टाइल
बलिउड अभिनेत्री काजल मुखर्जीको जन्म सन् १९७४, अगस्ट ५ मा भएको थियो । उनको पिता सोमु मुखर्जी पनि फिल्म निर्देशक तथा निर्माता रहेका थिए । आमा तनुजा भने अभिनेत्री रहेकी थिइन् ।
बलिउडको पहिलो ‘बोल्ड फोटो शूट’, जुन ६७ वर्ष पहिले यी अभिनेत्रीले गरेकी थिइन्‘